I-Spotify ifikelela kubabhalisi abahlawulayo abazizigidi ezili-158 | Ndisuka mac
I-Spotify ifikelela kubabhalisi abayi-158 yezigidi
Ngexesha lekota yokuqala yowama-2020, Ababhalisi bebonke abahlawulweyo kwiSpotify bakhule baba yi-158 yezigidi, eyi-21% ngaphezulu kunangexesha elifanayo lonyaka ongaphambili. Nangona kunjalo, ilumkisa ngokungaqiniseki kokukhula kwayo kwixesha elizayo kumazwe afana ne-India, enye yeemarike zokugqibela efikileyo kwaye apho bafumana ukonyuka kwamatyala e-COVID-19, ke abanako ukuqikelela ukuba kuya kuba njani ukukhula. kwiinyanga ezizayo.
Umyinge wengeniso ngomsebenzisi ngamnye wehle nge-7% ngonyaka-ukuya kwi-4,12 euro. Inkampani ichaza ukwehla kwamaxabiso asezantsi kwiimarike ezintsha kunye nezicwangciso ezinesaphulelo eziyilelwe ukutsala ababhalisile abatsha, into eza kuyilungisa kwiinyanga ezizayo. ngesibhengezo sokwanda kwezabelo kumazwe athile aseYurophu.
Iyonke irhafu yerevenue Spotify bonyuke nge-14%, ukuya kwi-1.930 yezigidi ze-euro. Ukusetyenziswa komsebenzisi ngamnye kukhule kwimimandla ephuhlisiweyo ngelixa iindawo ezisaphuhlayo "zibonisa iimpawu zokuphucula, kodwa zahlala zingaphantsi kwamanqanaba angaphambi kwe-COVID."
Nangona iApple Music iyinkonzo yesibini yokusasaza umculo ethandwayo emva kweSpotify, okanye ubuncinci kufanelekile ukuba amanani okukhula aqikelelwe ngabahlalutyi abathile aqinisekisiwe ukuba Bajolise malunga nababhalisi abazizigidi ezingama-70 namhlanje.
Kufuneka ikhunjulwe ukuba ukusukela ngoJulayi 2019, xa iApple yabhengeza oko ifikelele kubabhalisi abazizigidi ezili-60, inkampani khange iphinde ithethe ngalo mbandela.
IAmazon, yenxalenye yayo, ibhengezwe kwasekuqaleni kwe2020, Ukudibanisa zonke iindlela ezinikezelwa ngumculo (ukubhalisa ngaphandle kweentengiso, ukudlala kunye neentengiso kunye neAmazon Prime Music) kusasazo, wayenabasebenzisi abazizigidi ezingama-55 inani ekufuneka lonyukile kunyaka ophelileyo nangona inkampani kaJeff Bezos ingakhange ihlaziye elo nani kwakhona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Spotify ifikelela kubabhalisi abayi-158 yezigidi
Intsha ye-Apple TV 4K, iMac kunye nePad Pro ziya kufumaneka ekupheleni kukaMeyi